Maxaa ku dhacay Donald Trump markii Kongresska Mareykanka uu u codeeyay in xilka laga qaabo? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ku dhacay Donald Trump markii Kongresska Mareykanka uu u codeeyay in...
Maxaa ku dhacay Donald Trump markii Kongresska Mareykanka uu u codeeyay in xilka laga qaabo?
Madaxweyne Trump / Photo Credit: REUTERS
Washington (Halqaran.com) – Aqalka Hoose ee Congresska Maraykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyey labo qodob oo kala ah, 1) inuu ku takri falay awooddii madaxweynenimo iyo 2) inuu horjoogsaday codsigii kongereeska ee ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu goluhu codsaday.
Codbixintii qodobka koowaad ayaa waxa natiijadiisu ahayd 230 mudane oo oggolaatay in madaxweynaha xilka laga qaado iyo 197 mudane oo diiday.
Qodobka labaad ayaa waxa taageeray 229 mudane halka 198 mudane oo iyagu diideen.
Maxaa ku dhacay Trump codeyntii kadib?
Tan iyo intii ay dhacday codeynta, Aqalka uu kala laabtay codka kalsoonida, Trump juuqdiisa lama hayo.
Ma jiro wax qoraal ah oo uu soo dhigay, balse waa hadal haynta ugu weyn ee warbaahinta Maraykanka iyo adduunkaba.
Qoraalkii ugu dambeeyay ee uu soo dhigay waxaa la daabacay ilaa 8 saac ka hor.
Aqalka Hoose ee Congresska Maraykanka
u codeeyey in xilka laga qaado Trump